Mhedzisiro yekurerwa uye Kuchinja | Martech Zone
Chipiri, Gunyana 27, 2009 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Ndiri kuverenga Kevin Eikenberrybhuku, Hutungamiriri Hunoshamisa: Kuburitsa Hutungamiri Hwako Hunyanzvi Humwe paNguva uye tichave tichinwa kofi naKevin mangwana. Iri ibhuku rinonakidza - uye chitsauko chimwe chakarova kumba neni kutsigira shanduko.
Kevin anokurukura shanduko mune zvakadzama ruzivo. Imwe yemareferensi anoshandiswa naKevin ibhuku ra1962 rakanyorwa naEverett Rogers, Kuparadzaniswa kweInnovations. Iyo dzidziso yakamira muyedzo wenguva ... ichipa ruzivo rwekuti isu tinoshandisa sei matekinoroji. Kuparara kunotevera:
Zvinotonyanya kufadza ndezve paunotarisa kugamuchirwa pachikero chenguva. Heano mamwe mimwe mienzaniso yekubvumidzwa kwehunyanzvi:
Izvo zvakati, ini handina chokwadi chekuti chero munhu akurukura kana kuyera bhizinesi kuita kwekutorwa. Chimwe chezvidimbu zvemazano andinopa vatengi ndechekuti, kana nzira ichinge yaratidza asi isati yanyanya, mukana wekukanganisa bhizinesi rako wakakura. Sezvo nguva inopfuura uye mabhizinesi achiramba achiregeredza kubvumidzwa, ivo vari kurasikirwa nekwaniso yeiyo kukanganisa. Heino chati yangu yedzidziso:
Ndakaona makambani apinda mangwanani-ngwanani pane zvitsva zvisina kuratidzwa uye vakanyudza tani yemari uye kudyara muaya matekinoroji, vachirasikirwa neakawanda acho. Mumwe muenzaniso wemazuva ano ndeye computa yegore. Vagadziri vekutanga uye vanogamuchira tekinoroji vakashandisa mamirioni uye havana kukohwa mabhenefiti; zvisinei, vakagadzira nzira yekuratidza tekinoroji. Kamwe zvaratidza, gore komputa ikozvino isinganyanye kudhura uye ichikura nekukurumidza mukutorwa kwayo. Iko kukanganisa kune mabhizinesi anoshandisa gore komputa izvozvi kwakakura… asi sekugamuchirwa kwayakaitwa muindasitiri, hakuchazove mukana wekukwikwidza - kunenge kuri kukuru.
Sezvauri kuongorora musanganiswa wako wekushambadzira uye uchiramba uchiregeredza kukosha kwezviri mukati, blogging bhizinesi, optimization yekutsvagisa uye midhiya yenhau… urikushaya mukana wekujoinha ruzhinji rwevatambi kuti vakoshe zvakanyanya bhizinesi rako. Unogona kuenderera mberi nekumirira - iri chokwadi iyo ngozi nzira yekubuda. Nekudaro, usashamisike kana kunonoka kugamuchirwa kwako kuchikanganisa zvishoma kana kusave nebasa pabhizinesi rako. Muchokwadi, iwe ungangoda kutora kuti ungorambe uchikwikwidza mumusika.
Semushambadzi uye tekinoroji, ndinotenda zvakakosha kuti makambani Ramba wakadaro nehunyanzvi. Ini handisi kutaura kuti makambani ese anofanirwa kutora nekutora nekukurumidza. Zvandiri kutaura ndezvekuti makambani aone mikana yekutorwa kwekutanga uye kuti mhedzisiro yayo ingave sei kana ikashandiswa kumatambudziko ane bhizinesi ravo. Bhizinesi rega rega rine zvinetswa uye matekinoroji ari kuchinja anogona kunge ari mhinduro dzinoshanda kumatambudziko iwayo.
Muenzaniso chaiwo: Kana iwe uri bhizimusi riri kunetsekana nekushambadzira kwakawanda uye kuwana vatungamiriri vanokodzera izvozvi, kutora kwekutanga kwakaenzana nekutsvaga injini yekushambadzira, kuvandudza zvemukati (kublogi bhizinesi) uye kuwedzera zvirimo zvako kunetiweki dzakakodzera (pasocial network). Nekutora pakutanga, iwe unogona kuwana yekusvetuka kutanga kune vako vanokwikwidza uye uwane musika mugove. Kana iwe ukamirira, iwe unenge uchiita izvi kungo chengeta mune ramangwana… uye nguva yako yekuwana inenge yapfuura.
MC Hammer 2.0 uye Yega Branding